अनुप्रयोग कार्यगतताको ठुलो सम्झौता सर्टकट कुञ्जीहरू प्रयोग गरेर बोलाउन सकिन्छ। उदाहरणका लागि, आदेश+O Ctrl+O सर्टकट कुञ्जीहरूफाइल मेनु मा खोल्नुहोस भन्दा अर्को प्रविष्टिमा देखाईएका छन।यदि तपाईँले सर्टकट कुञ्जीहरू प्रयोग गरेर यो कार्यलाई पहुँच गराउन चाहनुहुन्छ भने आदेश Ctrl थिच्नुहोस र सामाईरहनुहोस र त्यसपछि O कुञ्जी थिच्नुहोस। संवाद देखिए पछि दुवै कुञ्जीहरू छाड्नुहोस।
सर्टकट कुञ्जीहरूद्वारा मेनुहरू बोलाईदै
मेनु पट्टीमा देखाईएका केही क्यारेक्टरहरू कच गरिएका छन।तपाईँले मेनुलाई ALT कुञ्जी सँगै कच गरिएका क्यारेक्टरहरूलाई थिचेर सिधै पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक मेनु खोलियो भने,तपाईँले फेरि कच गरिएका क्यारेक्टरहरू फेला पार्नुहुनेछ। तपाईँले यि मेनु वस्तुहरूलाई कच गरिएका कुञ्जीलाई थिचेर सिधै पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
ESC थिच्दा परिवर्तनहरू बचत नगरिकन संवादलाई बन्द गर्दछ। यदि तपाईँले एउटा बटनमा फोकस राख्नुभयो भने, तपाईँले बटनको नाम थोप्ला थोप्ला रेखा फ्रेम मात्र देख्नुहुन्न, तर चयन गरिएको बटन तल झन मोटा छायाँ देख्नुहुनेछ। यसले तपाईँले यदि तपाईँले Enter कुञ्जी थिचेर संवाद निकास गर्नुहुन्छ भने,यो बटन आफै थिच्नु बराबर हुन्छ भन्ने कुरा प्रकट गर्दछ।
यदि तपाईँले तान्नुहोस र छाड्नुहोस प्रयोग गरिरहनु भएको छ भने, माउसले चयन गरेर वा वस्तुहरू र नामहरू क्लिक गरेर तपाईँले कुञ्जीहरू Shift प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, थप कार्यगतता पहुँच गर्नका लागि आदेश Ctrl र कहिलेकाहीविकल्प Alt । तान्नुहोस-र-छाड्नुहोस अवधिमा कुञ्जीहरू समाईरहेको बेलामा परिमार्जन कार्यहरू उपलब्ध हुन्छन जुन माउस सूचक परिवर्तन गर्ने फारम द्वारा जानकारी हुन्छन। फाइलहरू वा अरू वस्तुहरू चयन गरेको बेलामा,परिमार्जक कुञ्जीले चयन लाई विस्तार गर्न सक्दछ - यहाँ वर्णन गरिएका विकल्प कार्यान्वयन युक्त छन। यो प्रकार्यको उपलब्धता तपाईँंको सञ्झ्याल प्रबन्धकमा भर पर्दछ।
पूरै पाठ चयन गर्नका लागि आदेश Ctrl+A प्रयोग गर्नुहोस। चयन हटाउनका लागि दायाँ वा बायाँ कुञ्जी प्रयोग गर्नुहोस।
कर्सर अवस्थितबाट शब्दको अन्त्य सम्म सबै कुरा मेटाउनका लागि आदेश Ctrl+Del प्रयोग गर्नुहोस।
आदेश Ctrl र दायाँ वा बायाँ बाँण प्रयोग गर्दा,कर्सर शब्द बाट शब्दमा उफ्रन्छ,यदि तपाईँले Shift कुञ्जी पनि थिच्नुहुन्छ भने,एउटा शब्द पछि अर्को पनि चयन हुन्छ।
घुसाउनुहोस मोड र अधिलेखन मोड बीचमा स्विच गर्न र फेरि फर्किनका लागि INSRT प्रयोग हुन्छ।
आदेश Ctrl+Z सर्टकट कुञ्जीहरू एक पटकमा परिमार्जनहरू पूर्वस्थितिमा ल्याउनका लागि प्रयोग हुन्छन, त्यसपछि पाठमा पहिलो परिवर्तन भन्दा पहिले भएको स्थिति हुनेछ।
अरू फाइलहरू र डाइरेक्टरीहरूबाट स्क्रोल गर्नका लागि तल बाँण कुञ्जी प्रयोग गर्नुहोस। URL फाँटमा अवस्थित सहायक डाइरेक्टरी पनि प्रदर्शन गर्नका लागि दायाँ बाँण कुञ्जी प्रयोग गर्नुहोस। तपाईँले URL को भागमा प्रवेश गरिसकेपछि End कुञ्जी थििच्नुभयो भने द्रुत स्वत:समाप्ति उपलब्ध हुन्छ। तपाईँले चाहेको कार्यक्रम,कागजात वा डाइरेक्टरी एक पटक फेला पार्नुभयो भने,Enter थिच्नुहोस।
एउटा संवादमा फोकस गरिएको बटन सक्रिय पार्दछ।
हालै एउटा संवादमा चयन गरिएका नियन्त्रणको सूची खोल्दछ। यी सर्टकट कुञ्जीहरू कम्बो बाकसहरूमा मात्र लागू हुँदैनन, प्रतिमा बटनमा पनि पप-अप मेनुहरू सँग लागू हुन्छन। Escape कुञ्जी थिचेर खोलिएको एउटा बटन बन्द गर्नुहोस।
विस्तारित टिप्स हालै चयन गरिएको आदेश, प्रतिमा वा नियन्त्रणका लागि सुरु गर्दछ.
अर्को सहायक सञ्झ्याल (उदाहरणका लागि,कागजात/डेटा स्रोत दृश्य) मा फोकस सेट गर्दछ
पहिलो मेनु (फाइल मेनु) सक्रिय पार्दछ
हालको कागजात बन्द गर्दछ (जब LibreOffice बन्द गर्नुहोस जब अन्तिम खुल्ला कागजात बन्द हुन्छ)
छड्के विशेषता चयन गरिएको क्षेत्रमा लागू हुन्छ। यदि कर्सर एउटा शब्दमा अवस्थित गरिएमा, यो शब्द पनि छड्केमा चिन्हित गरिन्छ।
बाक्लो विशेषता चयन गरिएको क्षेत्रमा लागू हुन्छ। यदि कर्सर एउटा शब्दमा अवस्थित गरिएमा,यो शब्द पनि बाक्लोमा राखिन्छ।
कच गरिएको विशेषता चयन गरिएको क्षेत्रमा लागू हुन्छ। यदि कर्सर एउटा शब्दमा अवस्थित गरिएमा, यो शब्द पनि कच गरिन्छ।
चयन गरिएको पाठ वा वस्तुहरूबाट सीधै ढाँचा हटाउँदछ। (ढाँचाबद्ध - पूर्वनिर्धारित ढाँचा मा जस्तै)
क्षेत्रहरूको बीचमा सर्दछ (पछिल्तिर)
सङ्ग्रहालयको नयाँ विषयवस्तुमा सर्टकट कुञ्जीहरू:
गुणहरू संवाद खोल्दछ।
एउटा नयाँ विषयवस्तु घुसाउँदछ
सङ्ग्रहालय पूर्वावलोकन क्षेत्रमा सर्टकट कुञ्जीहरू:
एउटा पर्दा माथि स्क्रोल गर्नुहोस।
एउटा पर्दा तल स्क्रोल गर्नुहोस।
पछिल्तिर कदम चाल्नुहोस (वस्तु दृश्यमा मात्र)
पङ्क्ति चयन टगल गर्दछ
हालको स्तम्भ चयन गर्दछ
F6 सँग उपकरणपट्टी चयन गर्नुहोस। चाहेको उपकरणपट्टी चयन गर्नका लागि तल बाँण र दायाँ बाँण प्रयोग गर्नुहोस र Command Ctrl+Enter थिच्नुहोस
एउटा कागजात Command Ctrl+F6 सँग चयन गर्नुहोस र Tab थिच्नुहोस
ह्याण्डल चयन मोडबाट निस्कनुहोस र वस्तु चयन मोडमा फर्किनुहोस।
चयन गरिएको बिन्दु सार्नुहोस।(ग्रिड-मा-सटाउनुहोस कार्यहरू अस्थायी रूपमा असक्षम पारिएका छन, तर अन्त्य बिन्दुहरू अहिले सम्म एक अर्कामा टाँसिएका छन)
चयन गरिएका रेखाचित्र वस्तु एक पिक्सेल सर्दछ (चयन मोडमा)
एउटा रेखाचित्र वस्तु रि-साइज गर्दछ(ह्याण्डल चयन मोडमा)
एउटा रेखाचित्र वस्तु घुमाउँदछ (परिक्रमण मोडमा)
रेखाचित्र वस्तुका लागि गुण संवाद खोल्दछ।
रेखाचित्र वस्तुको एउटा बिन्दु चयन गर्नुहोस (बिन्दु चयन मोडमा) / चयन रद्द गर्नुहोस।
बिन्दु चयन मोडमा एउटा थप बिन्दु चयन गर्नुहोस।
रेखाचित्र वस्तुको अर्को बिन्दु चयन गर्नुहोस (बिन्दु चयन मोड)
परिक्रमण मोडमा, परिक्रमणको केन्द्र पनि चयन गर्न सकिन्छ।
रेखाचित्र वस्तुको पहिलो बिन्दु चयन गर्नुहोस (बिन्दु चयन मोड)
आदेश Ctrl+ चयन प्रतिमामा Enter गर्नुहोस
बिन्दु चयन मोड छोड्नुहोस। रेखाचित्र वस्तु पछिबाट मात्र चयन गरिएको छ.
रेखाचित्र वस्तुको एउटा बिन्दु सम्पादन गर्नुहोस (बिन्दु सम्पादन मोड)